Semalt Inotsanangura Maitiro Akakosha eE-Commerce SEO
Kuvaka webhusaiti uye kuwana magwagwa zvinhu zviviri zvakasiyana.Kutanga muchengeti yepaIndaneti ibasa rakaoma asi zvinogona kuoma kana uri kuedza kuwana vatengi kupinda neIndaneti. Ichidambudziko rinowedzera zvakanyanya sekukwikwidza kuderedza mikana yedu yekuenda kumusika. Paunenge wanyatsoongorora nekugadzira awebhusaiti, iwe unoda kuwanikwa nekutsvaga injini dzakadai seGoogle, saka iwe uchada kutsvaga injini yekugadzirisa. Iyi nzirakunosanganisira kugadzirisa nzvimbo yako yepaiti maererano nezvinodiwa zvekutsvaga injini yekugadzirisa kuitira kuti uwane nzvimbo yepamusorospecific key terms.
Jason Adler, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt inopa mazano anokosha ekuita kuti zvinyorwa zvako zvinyorwa uye webhusaiti zvakagadziridzwa kukubatsira iwe kuwedzera yakakwirira muzvinjini.
Kuvandudza nekukurumidza nekupindura kwewebsite yako
Shandisa mazita ekuremekedza uye zvinyorwa kuti zvive zvakamanikidza uye zvinogona kuitwa
Shandisa kwenguva yakareba, zvinyorwa zvinoshamisa zvezvibereko uye misi mikuru yemashoko
Wedzera kuongororwa kwevatengi kukukwezva vamwe vatengi
Isa zvinyorwa zvichitaura zvinoshandiswa nevatengi
Paunoita SEO, zvigadzirwa zvakawanda zvinogona kubatsira pamabasa ako. Zvishandiso izvi zvinosanganisira:
PicMonkey uye Kraken. Kusanganiswa kwezvigadzirwa izvi kunokupaweb design design optimization features. Vanogona kugadzirisa uye kuderedza ukuru hwemifananidzo mumapeji ewebhu achiwedzera kasi uyemhinduro yewebsite yako..
GetFiveStars. Iri sarudzo inobatsira avo vane dambudziko pamusoro pavomutengi mhinduro. GetFiveStars inotumira email kune vatengi vako nemashoko anodiwa. Ichapindira chakanaka kana chakaipamhinduro pane internet uye nekuvandudza mararamiro ako.
Autopilot. Ichi ndicho chinhu chisingabatsiri chinogona kugadzirisa zvimwe zvinhuyekutengesera kwako. Iyi purogiramu inouya ne 30-day free trial inoteverwa ne 25usd yemwedzi kubhadhara.
YoRocket. Chirongwa ichi chinogona kuongorora meta zvinyorwa uye tsanangudzoyewebsite. Iwe unogona kuishandisa kuti uite zvinyorwa zvinomanikidzira uye utungamirire zviri mukati pewebhu yewebhu. Brian Dean naRedlinko vakagadziriraichi chinhu. Iko kushanda kwepamberi, uye vashandi vanobhadhara kuti vawane kudarika kwavo kuburikidza nemitengo ichikwirira.
Semalt Keyword Suggestions. Iri ndiro chinhu chinokosha chekutsvaga izwi iroinogona kupa mutsara mutsara mazwi. Inogona kubatsira mukukupa mazwi okutsvaga vatengi vari kushandisa kushandisa kutenga kubva paIndaneti. Inogonakukupa mazwi ekunyora mazita kana kugadzira zvinyorwa zvepaIndaneti.
Kuvaka webhusaiti uye kuwana kutenderera kwevashanyi kunogona kuva kwakaomakuti zvibudirire. Ne SEO, zvinhu zvinoita kunge zvisiri nyore, uye pane tariro. Kuvandudza webhusaiti yako kuburikidza neSeO tactics likekusarudza zviripo uye backlinking zvinogona kuita kuti nzvimbo yako iwane magwagwa. Kushandisa eCommerce SEO zvishandiso, unogonakusimbisa tsika inogadzirisa inobudirira yekuita kuti webhusaiti yako igare yakakwirira panzvimbo dzekutsvaga uye, nokudaro, kugamuchiravatsva vashanyi Source .